Hiob 26 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
26 Ɛnna Hiob buae sɛ: 2 “Ɔboa de, woaboa nea onni tumi ampa!Woagye nea onni ahoɔden ampa!+ 3 Afotu de, wode bi ama nea onnim nyansa,+Na nyansa nso, woama nnipa bebree ahu bi! 4 Hena na worekasa akyerɛ no,Na hena ahome na efi wo mu fi? 5 Awufo mpo ho popoWɔ ɛpo ne emu ateasefo ase.+ 6 Adamoa* da adagyaw n’anim,+Na ɔsɛe amoa nni nkataho. 7 Watrɛw atifi fam wɔ ahunmu,+Na ɔde asase asɛn nea hwee nni; 8 Wakyekyere nsu, omununkum mu,+Na omununkum no mpae wɔ ase; 9 Wakata ahengua no anim,Watrɛw ne mununkum+ mu akata so. 10 Watwa kontonkron wɔ nsu ani,+Faako a hann ne sum hyia. 11 Ɔsoro nnyinaso hinhim,Na n’animka ma ɛwosow. 12 Ɔde ne tumi hwanyan ɛpo,+Na ɔde ne ntease bubu onuɔdenfo*+ pasaa.+ 13 Ɔsoro de, ne mframa na ɔde tew hɔ,+Na ne nsa hwirew ɔwɔ a ne ho yɛ hare mu.+ 14 Hwɛ! Eyinom yɛ ne nnwuma mu ketewaa bi,+Na ne ho asɛm kakraa bi na atwa onipa asom!N’aprannaa kɛse no de, hena na obetumi ate ase?”+
^ Ɛbɛyɛ asuboa kɛse bi.